Noocyada kala duwan ee geedaha macmalka ah way badan yihiin, qaabkuna waa dhammaystiran yihiin. Iyada oo ku saleysan fikradda "cagaarka, deegaanka, saaxiibtinimo, sahlan oo qurux badan", waxaan ku dadaalnaa inaan abuurno suuq gaar ah oo loogu talagalay dhirta jilicsan, si aan u fududeyno nolosha dadka suuxinta, beddelo qurx ...
Waxaa jira soo saareyaal warshad dabiici ah oo aad u badan oo ku dhex jira suuqa. Sidaa darteed, shuruudaha tayada adag ayaa looga baahan yahay inay ka soo baxaan soo saareyaal badan. Hadda aan soo bandhigno wax ku saabsan kantaroolka tayada leh ee shirkadeena: Marka hore: Alaabada ceeriin ee la soo xulay: Qurub caag ah (1) Dhammaan waxyaabaha la soo dejiyo ee PE n ...
Waxaan wada ognahay in dhirta dhabta ahi u baahan tahay dayactir, iyo ubax alwaax macmal ah sidoo kale waxay u baahan yihiin dayactir. Gaar ahaan sida loo dayactiro. Aynu si kooban u soo bandhigno aqoonta dayactirka ee dhirta macmalka ah. Dhirta macmalku waxay ka samaysan yihiin waxyaalaha kiimikada ah kadib markii la isku haysto, waxay leeyihiin xoogaa la mid ah ...